musha Oceania Alexander Volkanovski Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Alexander Volkanovski Biography inokuudza chokwadi nezve nyaya yake yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (Tony naMary Volkanovski), Mhuri, Wife (Emma Volkanovski).
Moreso, Vana vemumhanyi (Ariana naAirlie), Vanun'una, Hupenyu hweMunhu, Mararamiro, Muhoro uye mambure akakosha.
Kuita mupfupi Biography yedu, tinokupa iwe mufananidzo wakazara weHupenyu nhoroondo yaAlexander Volkanovski.
Iye inyanzvi yeAustralia yakasanganiswa martial artist. Yedu Biography inotanga kubva panguva dzake dzekuzvarwa. Zvadaro, kusvikira ava simba rekuverenga muOctagon.
Kuti ukwidze biography yako chishuwo, isu tinopa iyo gallery nzira yezviitiko zvakatenderedza hupenyu hwaAlexander Volkanovski. Pasina kupokana, iyo mifananidzo yaunoona pazasi inopfupisa iyo MMA Star nhoroondo.
Alexander Volkanovski Biography - Tarisa Hupenyu hwake kubva pakutanga basa kusvika pakubudirira kwake.
Ehe, isu tinoziva iye ane mukurumbira wakashata semurwi. Anogona zvakare kunge ari munzira yake yekuve wekutanga Aussie kuve wekunzwa kwepasirese mumutambo. Kunyangwe achiyemurwa, vashoma chete ndivo vakaverenga memoir yakapfupika nezvake.
Naizvozvo, takazviona sezvakakwana. iwe unoziva inonakidza nyaya yaAlexander Volkanovski. Zvakare, iko kuparara kwechiitiko chake chemitambo kusvika parizvino. Pasina imwezve ado, ngatitangei.
Alexander Volkanovski Yemwana Nhau:
Kutanga, Alexander Volkanovski akazvarwa musi we28th waGunyana 1988. Iye akazvarwa kuna baba vake, Tony Volkanovski naamai, Mary Volkanovski.
Nhoroondo yedu yeAustralia yakazvarwa muWarilla, nzvimbo yegungwa yeShellharbour, Australia, mukati medhorobha reWollongong.
Alexander Volkanovski akazvarwa pakati pemukoma wake mukuru. Ivo vaviri vakabva mubatanidzwa wevabereki vavo (Tony naMary Volkanovski).
Makore ekutanga uye makore ekukura:
Alexander Volkanovski anga ari mudikani wemitambo kubva paudiki. Akatanga kudzidziswa mumitambo ye Greco-Roman achiri mudiki. Mutambo uyu wanga wakasiyana nemamwe marudzi ewrestling. Inorambidza kubata pazasi pechiuno.
Mutambi anoshamisa wechiGiriki nechiRoma, akahwina mukombe wenyika pazera gumi nemaviri. Paaive achiri kuyaruka, akatarisawo Ultimate Fighting Championship zviitiko. Aiwanzobvarura matepi eUFC VHS kubva kuBlockbuster. Ipapo iye akatengawo UFC kubhadhara pamaonero.
Zvisinei, pazera remakore gumi nemana, akarega kurwa. Pane kudaro, akaisa pfungwa pakutamba nhabvu yeligi nhabvu. Zvikwata zviviri zvevatambi gumi nevatatu zvinotamba mutambo uyu padenderedzwa. Alexander Volkanovski akaridza mutambo semberi-rower.
Alexander Volkanovski Yemhuri Mhemberero:
Mutambi weAustralia ndewemhuri yepakati yekutambira. Baba vake vaive concreter. Iye anosanganisa, anodzvanya uye anopedzisa kongiri yemabasa ekuvaka. Zvichakadaro, amai vake vaitarisira imba. Saka vaingova nezvakakwana kuti vararame.
Alexander Volkanovski Akatangira Mhuri:
Zvino, ngatiendererei mberi kumadzitateguru ake. Alexander Volkanovski anobva kuMacedonia uye chiGreek. Baba vake vakazvarwa muBeranci muSR Makedonia (ikozvino North Macedonia).
Kune rimwe divi, amai vake vanobva kuGreece. Nekudaro, Alexander akaberekerwa mudhorobha reShellharbour, New South Wales, Australia.
Nekuda kweizvozvo, isu tinogona kutaura kuti ndewedzinza rakasanganiswa. Zvisinei, iye ndeweAustralia. Takaratidza pikicha pazasi ichiratidza mhuri yaAlexander Volkanovski.
Mufananidzo unoratidza Mhuri yaAlexander Volkanovski.
Alexander Volkanovski Pakutanga Basa:
Dzinza reMasedhonia raitamba semi-nyanzvi rugby ligi. Akatamba maWarilla Gorilla muSouth Coast Rugby League. Mushure meizvozvo, akapihwa iyo Mick Cronin Medal mu2010 semutambi weligi.
Alexander Volkanovski akaitawo basa rakakosha muWarilla's 2011 Premiership. Akagamuchira iyo Man yeMutambo mubairo wekukunda kwechikwata chake pamusoro peGeringong. Zvakadaro, Volkanovski akabva asiya rugby ligi aine makore 23.
Maitiro ekudzika kweMasedhonia airidza semi-nyanzvi rugby ligi kwenguva pfupi.
Alex akatanga kudzidziswa muMMA aine makore 22. Akasiya rugby kuti aite basa rehunyanzvi muMMA. Asi zvadaro, akaenderera mberi neGriki neRoma achirwira kuti arambe akagwinya panguva yelugby ligi offseason.
Nokukurumidza zvakakwana, kuda kwake MMA kwakakura kuita nzira yebasa. Volkanovski akashandura mutambi akanaka.
Aive aine simba rekurudyi uye aive mutsimba anotyisa. Ona kuti ligi rerugby rakagadzira nzira yebasa raAlexander reMMA.
Alexander Volkanovski Dzidzo:
Volkanovski akaenda kuLake Illawarra High Chikoro kuburikidza nemakore ake ekuyaruka. Chikoro ichi chinopihwa mari nehurumende co-dzidzo yakazara yechipiri zuva rechikoro. Yakanga iri muReddall Parade, mudunhu reIllawarra reNew South Wales, Australia.
Kunyangwe aifarira zvemitambo, akaramba kutsauswa. Akapedza aine giredhi rakanaka. Asi ipapo, aifanira kujoina baba vake semubatanidzi.
Volkanovski akaenda kuLake Illawarra High Chikoro kuburikidza nemakore ake ekuyaruka.
Alexander Volkanovski Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Mukwikwidzi wemitambo weAustralia akatanga semusviki pahuremu hwepakati. Alexander Volkanovski akarwa mumasangano akasiyana siyana eMMA mudunhu reOceania. Akarwa kubva 2012 kusvika 2016 asati asaina neUFC.
Akabuda mukundi paPacific Xtreme Combat (PXC) zita. Kuteedzera, kwaive maviri eAustralia Kurwisa Championship Featherweight mazita. Volkanovski akaunganidza chinyorwa che13–1. Akange aine gumi dzakakunda kukunda asati ajoina iyo UFC.
Volkanovski akaita rake rekusimudzira rekutanga pazuva re26th yaNovember 2016. Akawedzera kuhwina kwake streak kusvika pa11 aine wechipiri-kutenderera TKO. Kurwa kwairwisa Yusuke Kasuya kuUFC Fight 101.
Volkanovski akaita yake yekusimudzira debut kurwisa Yusuke Kasuya kuUFC Fight 101.
Akazvizivisa kuti aizodonha kubva palightweight kuenda kufeatherweight pamusangano wevatori venhau wepashure-kurwa kuhondo yake inotevera.
Saka, on kudzokera kwake ku featherweight, akahwina kurwa kwake naMizuto Hirota, Shane Young, naKennedy.
Alexander akahwinawo Darren Elkins, Chad Mendes uyezve José Aldo muna 2019. Akakunda kurwa kwake kuzhinji nenzira imwechete.
Alexander Volkanovski Biography- Simuka Mukurumbira:
MMA Athlete akaita zita rake rekutanga rekuzvidzivirira mumutambo wakatarisana naMax Holloway musi wa11 Chikunguru 2020 paUFC 251. Akakunda iyo scuffle kuburikidza nesarudzo yekuparadzanisa. Akabuda sewekutanga kuzvarwa kuAustralia uye wechipiri Australia kuhwina menduru muUFC.
Zvakangodaro, mhedzisiro yacho yaive ine gakava pakati penhepfenyuro. Moreso, hunhu hweMMA, semutungamiri weUFC, Dana White, aimbove muridzi.
Zvakare, iye musiki wemitemo system John McCarthy, uye akawanda akavhenganiswa emasoja maartist. Alexander Volkanovski achiri akarembera mukusahadzika kwake ane nharo anokunda achipokana naMax Holloway.
Shure kwaizvozvo, muna Kubvumbi 2021, zvakaziviswa kuti Volkanovski, pamwe naBrian Ortega, vaizoshanda sevarairidzi kuThe Ultimate Fighter 29 kuESPN +. Iyo showa ichaita vanokwikwidza ku bantamweight uye middleweight.
Munguva pfupi, Volkanovski akatarisana naBrian Ortega munaGunyana 2021. Hondo iyi yakaitika kuUFC 266 yeUFC Featherweight Championship. Tarisai, akakunda kurwa kuburikidza neyakafanana sarudzo.
Alexander anokunda UFC Featherweight Championship kurwisa Brian Ortega.
Nekukunda kweUFC Featherweight, Alex ajoina zvinoda zve Khabib Nurmagomedov, Anderson Silva, pane yakasarudzika runyorwa rwevarwi kuti vatange mabasa avo eUFC neisina kukundwa 10-0 rekodhi.
Mumwe murwi pane akanyorwa anosanganisira iye zvino welterweight shasha, Kamaru Usman.
Hondo yakamupa iye Hondo yeiyo Husiku mubairo. Parizvino, akarwa mitambo makumi maviri nemana, akahwina mitambo makumi maviri nematatu, uye akarasikirwa nemutambo mumwe chete nekugogodza pamberi paCorey Nelson. Tarisa zvakakosha mune clip iri pazasi.
Ndiani Emma Volkanovski Mukadzi Alexander Volkanovski.
Kunze kweOctagon, Alex ane mukadzi akanaka kumba. Mudzimai wake, Emma Volkanovski, ndomumwe wevatsigiri vake vakuru. Iye zvakare anopinda akawanda emitambo yake uye anogovera zviitiko zvake zviri kuuya pa Instagram.
Ivo vaviri vakasunga pfumo pazuva re21st yaGumiguru 2012. Alex nemukadzi wake, Emma, ​​ndivo vabereki vevanasikana vaviri, Ariana naAirlie. Anowanzo govana zviono zvemhuri yake yakanaka pa Instagram, achifarira kudya pamwe semhuri.
Kunze kweOctagon, Alex ane mukadzi akanaka, Emma kumba.
Zvimwe pamusoro paEmma Volkanovski:
Emma Volkanovski inyaya yekusimba. Ane Bsc. mune psychology kubva kuYunivhesiti yeSydney.
Uyezve, musikana wacho ane hanzvadzi nhatu. Emma anobva kumunhu ane mwero. Mukadzi wekusimba akazvarwa muShellharbour City Council.
Zvisinei, akakurira muSydney, Australia. Baba vake, John Harris naamai, Rose Harris varimi.
Pamusoro pezvo, akapedza hudiki hunofadza aine hanzvadzi dzake diki, Jessica naCarmela Harris. Vese vakapinda Cheltenham Girls High School.
UFC Champ nemukadzi wake anokwezva nevana vaviri.
Rudo rwaEmma naAlexander kuvanasikana vavo rwakadzama. Kufarira kwaaiita uropi hwemunhu kwakamuita kuti adzidze paYunivhesiti yeSydney.
Anotora kumasocial media mapuratifomu kutaura kuti anoda mhuri yake.
Kune nhevedzano yemifananidzo yakajeka, inopenya, uye inofadza inotonga chimiro chake. Vana vake vaviri vane hunhu hwakasiyana zvachose. Ariana anoda mukana wakanaka. Zvichakadaro, Airlie anoda kuita chibhakera kumusoro sababa vake.
Emma naAlexander rudo rwevanasikana vavo rwakadzama.
Alexander Volkanovski Hupenyu Hwemhuri:
UFC Featherweight Champion anoona mhuri yake sekurudziro yake. Alex anoda mhuri yake zvakanyanya. Aizoita nepese paanogona napo kuziva kuti vaive vakasununguka.
Alexander angadai asina kuzviita pasina rutsigiro rwevabereki vake, hama, uye hama. Zvino, ngatitarisei zvakanyanya kumitezo yemhuri yake.
Zvizhinji Nezve Alexander Volkanovski Baba - Tony Volkanovski:
Tony akaberekerwa muBeranci, North Macedonia. Iye Chibvumirano. Baba vaAlexander Volkanovski vanogadzira nzvimbo dzekushongedza pakongiri vasati vaisa chisimbiso. Anoita izvi parutivi kubva pakupera kwekongiri yebasa rekuvaka.
Ndiye mutsigiri anoshingairira wemwanakomana wake, Alexander. Alexander asati asimuka kubva kuRugby achienda kuUFC, Alex aifanira kugonesa baba vake kuti UFC yaive, yakachengeteka kana ichienzaniswa nerugby.
Tony akagovana, "Asi akandiudza kuti mutambo uyu wakachengeteka kupfuura ligi re rugby. Une muridzi wepembe anotarisa vanhu vaviri nguva yese, nepo murigi yelugby mune vanhu makumi maviri nematanhatu uye varidzi vatatu chete. ”
Zvino, iye mutsigiri mukuru. Takambomuona achipemberera kukunda kwemwanakomana wake kubhawa repanzvimbo, sezvinoonekwa mumufananidzo pazasi.
Baba vaAlex, Tony Volkanovski kupemberera kukunda kwemwanakomana wake kubhawa remuno.
Zvimwe Zvizhinji nezvaAlexander Volkanovski Amai - Mary Volkanovski:
Tony Volkanovski akaroora kuna Mary Volkanovski kweanopfuura makumi maviri emakore ikozvino. Ivo vaviri vane vana vaviri pamwechete. Ivo vanosanganisira Alexander nemukoma wake. Amai vaAlexander Volkanovski, Mary, vanga vari mudzimai anotsigira uye amai.
Akaratidza kunetsekana nehupenyu hwemwanakomana wake. Pane imwe nguva, amai vemhare, Mary Volkanovski, vakasimudzira mwanakomana wavo muchinyorwa cheFacebook. akataura nezve zvirevo iyo UFC yakatora kuve nechokwadi chekuchengetedza uye kugara zvakanaka kwevarwi vavo.
Amai vechikwata che featherweight vakagovana kushushikana kwavo kuti mwanakomana wavo abata hutachiona hunotyisa uye ari mune imwe nyika. Mary anogara akatarisa kuvana vake. Nekudaro, iye anochengetedza hupenyu hwakanyarara.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Alexander Volkanovski Hama:
Alexander Volkanovski ane mukoma mukoma. Sezvineiwo, iye zvakare murwi. Kuda kwaAlex kwekurwa kwakakura kuburikidza nemukoma wake. Iyo UFC Champ inoshuma maitiro aimboita kurova munhu wese panguva yehudiki! Takanga tiri madzimambo ekurwa nemaoko; anoshuma.
Anoti simba nesimba zviri mukati medu. Nekudaro, hama dzake dzekuMacedonia dzinoti inhaka yavo yeMasedhonia. Zvisinei, hama dzake dzechiGiriki dzinotaura zvakafanana.
Alex anoreva mukoma wake semunhu akasimba uye anoshanda nesimba. Ivo vaviri vanogovana chisungo chakasimba. Anogara aripo, kuratidza rutsigiro ruzere kuna Alex pese pazvinodiwa.
Zvimwe Zvizhinji nezveAlexander Volkanovski Hama:
Mutambi weUFC weAustralia ane hama. Kunze kwababa vake, amai, uye hanzvadzi. Alexander Volkanovski ane mashoma mashoma emhuri. Ana babamunini, vanatete, nasekuru nasekuru.
Alexander Volkanovski anoda hama dzake dzeMasedhonia neGreek. Anogovana navo nguva yakakwana. Tezvara vake havasii kusiiwa kunze. Tezvara vaAlex ndiJohn Harris, apo vamwene vake ndiRose Harris. Uye zvakare, iye ane hanzvadzi-mukuwasha, anoti Jessica naCarmela Harris.
Kunze kwekuve murwi, Alexander Volkanovski anodawo zvekubika. Anowanzo tumira mabikirwo ezvimwe zvinonaka zvekudya. Uyezve, anoshandisa nguva yakanaka nemhuri kunyangwe iri rakabatikana chirongwa cheiyo UFC shasha.
Moreso, anofarira rugby nhabvu nhabvu, mitambo yemavhidhiyo, tsiva uye kushanda kunze. Kubva pasocial media yake, zviri pachena kuti Volkanovski anoedza kuve akanaka baba nemurume.
Wrestler weAustralia anotora mukana wevezvenhau. Ipuratifomu inomubatsira kubvarura mukaha nevateveri vake. Anogovana mafoto kubva pakudzidziswa kwake, zvidimbu zvemutambo wake wemujaho, uye kuuya updates.
Alexander Volkanovski Mararamiro:
Volkanovski inowira muboka remukurumbira reUFC Champions. Kunyangwe achiedza kuramba asingazivikanwe. Zvakare, isu tinoziva nezve ino yakasarudzika mararamiro evazhinji veMMM nyanzvi.
Kutenga zvakavanzika zvejeti, shanu-nyeredzi dzekudya kwemanheru, dzimba dzepamusoro uye dzinokurumidza mota hachisi chinhu chikuru. Mamwe emakwikwi makuru ezita raAlex, akadai se Conor McGregor, muridzi $ 300,000, Rolls Royce.
Kunyange zvakadaro, Volkanovski inotyaira Mazda CX-5. Mota yakakosha madhora zviuru makumi maviri nezvishanu nezvigaro zviviri zvevana kumashure. Mushure mekuhwina mukombe weUFC gore rapfuura, Volkanovski akatenga imba nyowani yemamirioni 25,500. Waive mubairo kwaari iye nemhuri yake mushure memakore ekuzvipira.
Volkanovski anotyaira Mazda CX-5, inoita $ 25500.
Sekureva kwemutapi venhau, murwi weAustralia weUFC Alexander Volkanovski anofanirwa kuve nemambure akakosha emadhora zviuru zviviri. Ivo vakamupa iye angangoita $ 2 pakurwa. Zvakare, murwi akawana mari inokwenenzverwa $ 1,500,500 yekudzokorodza naMax Holloway.
Kunze kwebasa rake re octagon, anotsigirawo zvigadzirwa zvakaita seCMBT, Yakakomborerwa CBD, Sportsbet, uye Atheltikan.
Alexander Volkanovski Untold Chokwadi:
Kunze kwemashoko ari pamusoro apa, pazasi pane zvishoma zvinoyemurika chokwadi chingafadza fancy yako nezvaAlexander Volkanovski.
Chokwadi # 1: Yake Tattoo:
Asati ave nevana, Alex akange atora yake yekutanga tattoo. Chinyorwa chakanzi "MHURI". Ini ndaingoda chimwe chinhu neicho chakakosha icho chaanotaura. Kunze kwezvo, iye anodada nekuve murume wemhuri.
Mufananidzo unoratidza chikamu chetato raAlex.
Chokwadi # 2: Nickname Yake:
Alex anoshandisa zita remadunhurirwa rekuti "Mukuru" maererano naAlexander Mukuru. Fungidzira imhaka yemadzibaba ake eMacedonia uye amai vechiGreek nhaka. Iye anotenda kuti Alexander Mukuru aivewo nababa veMacedonia uye amai vechiGiriki saiye.
Chokwadi # 3: Murairidzi:
MuMalaysia Kupinda, Alexander Volkanovski akaonekwa saMurairidzi. Yakanga iri Amateur Mixed Martial Artist chaiyo show.
Alexander Volkanovski Biography Pfupiso:
Tinovimba iwe wakachengetedza Alexander Volkanovski Biography kusvika zvino. Iyo Champ pakutanga yakakwikwidza mumitambo yakawanda yeamateur mune yepakati weightweight chikamu. Akazo gadziridza kubva paremu ye rugby asati atendeuka.
Alexander Volkanovski akaenda pasi kune welterweight, lightweight uye pakupedzisira vakanyarara vatsoropodzi kuita featherweight MBUZI. Nekudaro, nekutarisa, shandisa tafura iri pazasi kuti uwane pfupi ruzivo nezve yedu MMA murwi.
Zita rizere: Alexander Volkanovski
Zita rekudanwa: The Great
Zuva rekuzvarwa: 28th Zuva raGunyana 1988
Basa: Nyanzvi yakasanganiswa nehondo
Kirasi Yehuremu: Featherweight
Pro MMA Rekodhi: 25-1-0 (Win-Kurasikirwa-Dhiza)
Dzidzo: Lake Illlawarra High Chikoro
Baba: Tony Volkanovski
Amai: Mary Volkanovski
Vanun'una: Hama (zita risingazivikanwe)
Mumwe: Emma Volkanovski
Vana: Ariana Volkanovski naAirlie Volkanovski (vasikana)
Hobbies: Yakavhenganiswa Martial arts, mutambi wetsiva, NFL, kushanda kunze.
kukwirira: 5 ft 6 mu (1.68m)
Muhoro: $ 390,000 USD
Mukupeta Biography yaAlexander Volkanovski uye Nyaya yeHupenyu Hwehudiki, Tinovimba wakadzidza zvidzidzo zvishoma. Chinhu chipi nechipi chinoitwa nomunhu; pane nzvimbo yekuda. Ndiwo shungu dzinogadzira dhiraivha yehukuru.
Volkanovski akatamba rugby pakutanga. Ipapo akaziva kuda kwake MMA. Pakupedzisira, akabuda semunhu ane hunyanzvi anorwisa. Aive nechikwata chemagetsi, chibhakera cheruoko rwerudyi, uye stereki yekushingairira. Dzimwe nguva zvinonzi Mushini unouraya Ngano.
Nhasi, iye anozivikanwa nemhando yake yekurwa. Kurwa kwake kunosanganisira combo yeMuay Thai, Wrestling, uye Brazilian Jiu-Jitsu. Nekudaro, iye achangobva kucherechedzwa nekuhwina zita rekuti Featherweight shasha.
Moreso, kutarisa kwake uye kutsunga kwake kwakaita basa rakakura. Zvakanaka, ndinotenda zvakare nerutsigiro ruzere kubva kumhuri yake, kunyanya baba vake uye mukuru mukoma. Alexander Volkanovski aigona kudzidza pasina nguva izvo zvingatora vamwe kwenguva yakareba.
Tinotenda kuti iwe wawana iyi memoir ichiita. Nyorera zvimwe zvebhaibheri chokwadi neyekutanga-kirasi mhando.